Momba anay - XIAMEN SANXI PACKAGING CO., LTD.
Xiamen Sanxi Packaging Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2009. Hatramin'ny nananganana anay, dia nirotsaka tamin'ny famokarana sy ny serivisy fanangonana fonosana malefaka izahay, manokana ny famolavolana sy ny fanamboarana ny rakotra alim-bovoka vita amin'ny alim-pito amin'ny endriny sy habe samihafa.
Fanohanana amin'ny varotra
Miarahaba anao manontany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao! Tianay halefa aminao ny anay
teny nindramina tsara indrindra arakaraka ny takinao.
Ny ekipa teknikanay dia efa za-draharaha amin'ny indostrian'ny fonosana, ho
manamboatra sy mampivelatra meterial fonosana tsara kokoa.
Fitaovana fonosana isan-karazany azo omena arakaraka ny takinao
mila, manana ivon-toerana R&D eo amin'ny faritany ao amin'ny orinasa izahay, izahay
mifantoka amin'ny fampivoarana ny fanatsarana vaovao hanaovana ny fonosana
tsara kokoa ary tsara kokoa.
Miaraka amin'ny fomba fisafoana feno, manarona ny fifehezana kalitao
ny akora, ny sehatry ny famokarana, ny trano fanatobiana entana, ny fitaterana sns
amin'ny. Ny ekipanay QA za-draharaha dia afaka mifehy ny kalitao mandritra ny fotoana
ny famokarana, na alohan'ny fandefasana, hanomezana toky fa ny mpanjifanay
hahazo vokatra kalitao.
VOKATRA MANDRESY NY MARKET
Manana matihanina matihanina sy fitaovana fanontana voafehy mifehy solosaina izahay, ary manana milina fanontana gravure haingam-pandeha ho an'ny fanontana miloko valo miloko fanontam-pirinty. Ny milina fanamainana haingam-pandeha haingam-pandeha dia manome antoka fa maharitra ny lokon'ny alim-bolantsika ary sariaka amin'ny tontolo iainana. .
Manana matihanina matihanina sy fitaovana fanonta fanaraha-maso mandroso amin'ny alàlan'ny solosaina izahay,
ary manana milina fanontana gravure haingam-pandeha ho an'ny fanontana miloko valo amin'ny fonosana. Ny milina fanamainana haingam-pandeha haingam-pandeha dia manome antoka fa ny foil aluminium misy antsika dia maharitra sy sariaka amin'ny tontolo iainana.
VOAVAO AMIN'IZAO TONTOLO IZAO
Masinina maro karazana vita amin'ny alim-pito vita amin'ny alimina sy milina fanaovana totohondry no ahafahantsika manome ara-potoana ary ahafahanay mamokatra fitaovana fonosana avo lenta hanehoana ny vokatrao amin'ny fomba mahafinaritra.
Amin'izao fotoana izao dia nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ireo orinasa an-trano sy any ivelany fanta-daza izahay, naondrana any amin'ny firenena maro isan-karazany ny vokatra ao anatinay Etazonia, Aostralia, Nouvelle Zélande, Singapore, Indonezia, Mexico, Russia, Columbia , Nepal, Alemana, Torkia ary Brezila. Tsy hitsahatra hanatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa izahay.